About Us - I-Edlon Wood Products Co, Ltd.
I-Edlon Wood Products Co, Ltd eyasungulwa ngonyaka we-2003, esenkabeni ye-HuaiHai zone yezomnotho, igcwele izinsiza zezinkuni nabasebenzi abanamakhono. Sihlala sigxila kuzixazululo zezinkuni zokwakha ezifayilisiwe nokwenziwa kwefenisha, Imikhiqizo yethu eyinhloko iqukethe i-COMMERCIAL PLYWOOD, FILM FACED PLYWOOD, DOORSKIN PLYWOOD ne-HPL PLYWOOD, izinhlobo eziningi zebhodi lamanoni kufaka phakathi i-PETG, i-ACYLIC, i-PVC, ne-MELAMINE ..... .
Silandela ukusetshenziswa okuzinzile kwezinsiza zokhuni kuqala ngekhwalithi, sihlala sakha igama elihle nehlanzekile i-EDLONWOOD, lokho kuqinisekisa imigomo yebhizinisi ethembekile nephakeme ngawo wonke amakhasimende ethu abalulekile.
Inqubo yokukhiqiza ye-plywood
Lawula ngokuqinile yonke inqubo ukubona ikhwalithi ezinzile, ukulethwa ngesikhathi nezindleko ezinqunyelwe
Ikhwalithi kuqala iqinisekiswa ngohlelo lokuphathwa kwekhwalithi lwe-ISO. Sigunyazwe yi-EU. Isitifiketi se-CE; I-ISO9001: Uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi lwe-2000; Isitifiketi se-US CarB futhi sisebenza ngokuqinile ngamazinga kazwelonke we-GB kanye ne-HPVA. Silandele njalo "Ikhwalithi yokusinda, idumela elivikelayo nentuthuko, Ukuphathwa okuqinile kokusebenza kahle" ifilosofi yebhizinisi futhi sisebenzisa ngenkuthalo amazinga we-GB / T9001-2000 nohlelo lokulawulwa kwekhwalithi. Uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi lwe-5S lusetshenziswa ngokuqinile, lungenza amandla okuqinisekisa ikhwalithi athuthukiswe kakhulu.
Intengo yokuncintisana inganikezwa ngoba ifektri itholakala maphakathi nesifunda somnotho we-HuaiHai, eduze neJiangSu, iShanDong, i-HeNan, i-AnHui, isikhungo sesifundazwe ezine, ukuthola isikhungo sezokuhamba, futhi sisondele kumachweba we-QingDao naseLianYunGang. Ukuceba ngezinto zokwakha izingodo futhi kushibhile kodwa kube nabasebenzi abanamakhono, kuqinisekisa ukuthi amanani ethu ayancintisana futhi nekhwalithi ezinzile enhle ngokubiza okuphezulu.
Insizakalo enhle kakhulu, iqembu lokuthengisa elikhethiwe, ukuxhumana okusebenzayo, nemibhalo enembile, kuzokukwenza ube ikhasimende elinelisekile. Ngokusekelwe ekuthembekeni kwethu okuhle kakhulu, umgomo wokuqala wekhwalithi, amanani ancintisanayo kanye nensiza enhle kakhulu, sifuna ukuxoxa ngezinsizakusebenza zethu ezicebile zaseShayina namakhasimende ethu ahlonishwayo athola izinzuzo ezinkulu lapho esebenza no-Edlon.
Amathegi - Imikhiqizo Hot - Sitemap - AMP Mobile